စီးပွားရေး စွန့်ဦးတီထွင်သူများအတွက် အရေးပါတဲ့ Design Thinking - For her Myanmar
ယောင်းယောင်းတို့ရေ…ယောင်းယောင်းတို့ထဲမှာ စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိလား။ ဒီနေ့တော့ ကျေးကျေးက အမျိုးသမီးလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်စတင်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ လိုအပ်မယ့် လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေနဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ နားလည်နိုင်အောင် ဝေမျှပေးသွားမှာပါ။
စီးပွားရေးတစ်ခုမှာ အရေးပါဆုံးယေဘုယျ လုပ်ရမယ့် အလုပ်က ၂မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Product Designing နဲ့ Business Planning တွေဖြစ်တယ်။ အလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Product Designing ဆိုတာက ကိုယ်ဘယ်ပစ္စည်းကို ရောင်းရမလဲကို စတင်စဉ်းစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Business Planning ကတော့ ကိုယ်ထုတ်လုပ်မယ့် ပစ္စည်းကနေ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုဝင်အောင်ရှာမလဲ။ ရေရှည်ဘယ်လိုဝင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ။ အခု ကျေးကျေး ရှင်းပြမှာကတော့ Product Designing မှာ အရေးပါတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်တဲ့ Design Thinking အကြောင်းကို အကျဉ်းချုံးလေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းရဲ့ design thinking ကို စတင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြဿနာတွေအတွက် ဖြေရှင်းတဲ့နေရာကနေစပြီး စတင်စဉ်းစားပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက လူတွေက ကိုယ်နဲ့ အသုံးမတည့်တဲ့ ပစ္စည်းကိုမဝယ်ပါဘူး။ အရိုးရှင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုပေးရရင် လူတိုင်းမွေးကတည်းကနေ သေဆုံးသွားတဲ့အထိ တစ်သက်လုံး ကြုံတွေ့ရတာပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဗိုက်ဆာတဲ့ပြဿနာပါ။ အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရင် သူများအိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေ ကိုယ့်အိတ်ထဲရောက်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် အလုပ်တွေများတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ထမင်းဆိုင်တွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ ပေါ်လာတာပါ။
Related article >>> နာမည်ကျော်စွန့်ဦးတီထွင် အမျိုးသမီးတွေ သူတို့စီးပွားရေးကို ဘယ်လိုစခဲ့ကြသလဲ။
အခုနောက်ပိုင်းဆို City Mart တွေမှာ ထမင်းပူပူ ဟင်းပူပူတွေ ဘူးလေးတွေနဲ့ တင်ရောင်းတာ တွေ့လာရပါတယ်။ အဲ့ဒါ design thinking ရဲ့ ပထမအဆင့်ပါ။ အဲ့ဒီထက် ပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ ထပ်စဉ်းစားတဲ့အခါ ဟင်းတွေကို ကြာကြာခံအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ကလည်း လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း စည်သွပ်ဘူး လုပ်ငန်းဟာလည်း တွင်ကျယ်လာပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ များလာတာကို တီဗီကြော်ငြာတွေမှာ တွေ့လာရမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါ လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ အကိုက်ညီဆုံး design thinking ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းက ပိုပြီးအောင်မြင်မှုကို ရရှိသွားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လေ့လာရင်းနဲ့လည်း design thinking ကို ပိုပြီးနားလည်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားကစားဖိနပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Nike ကိုပြေးမြင်မိမှာပါ။ Nike ရဲ့ ရှူးဖိနပ် series တွေထဲမှာ Flyknit Racer Shoes ရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ကွာလတီ တော်တော်ကို နာမည်ကြီးပါတယ်။ အားကစားဖိနပ်တစ်ရံမှာ ဒီဇိုင်း၊ ဈေးနှုန်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိမှုတွေကို မထုတ်လုပ်ခင် ပြီးပြည့်စုံမှုကို ရရှိဖို့အတွက် ၁၉၅ကြိမ် ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာ ဒီဇိုင်နာတွေချည်း ဆွဲတာမဟုတ်ဘဲ Nike မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုပါ ခေါ်ပြီး ဆွဲပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Nike ဝယ်ယူဝတ်ဆင်တဲ့သူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Nike ရဲ့ design thinking မှာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသက်သက်ပဲ မဟုတ်ဘဲ ဝယ်ယူသူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပါ ပါဝင်နေတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Related article >>> အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လိုပါလျှင်….
အဲ့ဒါကြောင့် ယောင်းယောင်းတို့လည်း design thinking ကို စဉ်းစားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဟာ ဘာလဲသေချာစီစစ်ပါ။ ကိုယ်က အနုပညာမှာ တော်တာလား၊ ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာတော်တာလား၊ စာရေးတဲ့နေရာမှာ တော်တာလား၊ လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာလား။ အဲ့ဒီအရာတွေကို Design Thinking နဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ Design Thinking ဟာလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေအများကြီးကို ဒီဇိုင်းတွေ ထွက်လာမှာပါ။ ကဲ…ယောင်းယောင်းတို့ရေ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုထုတ်ကုန်မျိုးကို တွေးမိသွားလဲ။
ယောငျးယောငျးတို့ရေ…ယောငျးယောငျးတို့ထဲမှာ စီးပှားရေးကို စိတျဝငျစားတဲ့သူတှရှေိလား။ ဒီနတေ့ော့ ကြေးကြေးက အမြိုးသမီးလေးတှေ ကိုယျပိုငျအလုပျစတငျလုပျဆောငျတဲ့အခါ လိုအပျမယျ့ လုပျဆောငျမှုလေးတှနေဲ့ စီးပှားရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဗဟုသုတလေးတှကေို လှယျလှယျကူကူ နားလညျနိုငျအောငျ ဝမြှေပေးသှားမှာပါ။
စီးပှားရေးတဈခုမှာ အရေးပါဆုံးယဘေုယြ လုပျရမယျ့ အလုပျက ၂မြိုးရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ Product Designing နဲ့ Business Planning တှဖွေဈတယျ။ အလှယျကူဆုံးပွောရမယျဆိုရငျ Product Designing ဆိုတာက ကိုယျဘယျပစ်စညျးကို ရောငျးရမလဲကို စတငျစဉျးစားတာပဲဖွဈပါတယျ။ Business Planning ကတော့ ကိုယျထုတျလုပျမယျ့ ပစ်စညျးကနေ ပိုကျဆံကို ဘယျလိုဝငျအောငျရှာမလဲ။ ရရှေညျဘယျလိုဝငျအောငျလုပျမလဲဆိုတာ ကွိုတငျပွငျဆငျထားတဲ့ အစီအစဉျလေးပါ။ အခု ကြေးကြေး ရှငျးပွမှာကတော့ Product Designing မှာ အရေးပါတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုဖွဈတဲ့ Design Thinking အကွောငျးကို အကဉျြးခြုံးလေး ရှငျးပွခငျြပါတယျ။
ကိုယျ့ကုနျထုတျပစ်စညျးရဲ့ design thinking ကို စတငျစဉျးစားတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြက ပွဿနာတှအေတှကျ ဖွရှေငျးတဲ့နရောကနစေပွီး စတငျစဉျးစားပါတယျ။ အရေးကွီးဆုံးက လူတှကေ ကိုယျနဲ့ အသုံးမတညျ့တဲ့ ပစ်စညျးကိုမဝယျပါဘူး။ အရိုးရှငျးဆုံး ဥပမာတဈခုပေးရရငျ လူတိုငျးမှေးကတညျးကနေ သဆေုံးသှားတဲ့အထိ တဈသကျလုံး ကွုံတှရေ့တာပွဿနာတဈခုရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါက ဗိုကျဆာတဲ့ပွဿနာပါ။ အဲ့ဒီပွဿနာကိုဖွရှေငျးနိုငျရငျ သူမြားအိတျထဲက ပိုကျဆံတှေ ကိုယျ့အိတျထဲရောကျလာမှာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ အလုပျတှမြေားတဲ့ ရပျကှကျတှမှော ထမငျးဆိုငျတှေ၊ လကျဖကျရညျဆိုငျတှေ ပျေါလာတာပါ။
Related article >>> နာမညျကြျောစှနျ့ဦးတီထှငျ အမြိုးသမီးတှေ သူတို့စီးပှားရေးကို ဘယျလိုစခဲ့ကွသလဲ။
အခုနောကျပိုငျးဆို City Mart တှမှော ထမငျးပူပူ ဟငျးပူပူတှေ ဘူးလေးတှနေဲ့ တငျရောငျးတာ တှလေ့ာရပါတယျ။ အဲ့ဒါ design thinking ရဲ့ ပထမအဆငျ့ပါ။ အဲ့ဒီထကျ ပိုပွီးတီထှငျဖနျတီးမှုနဲ့ ထပျစဉျးစားတဲ့အခါ ဟငျးတှကေို ကွာကွာခံအောငျ ထိနျးသိမျးဖို့ကလညျး လူတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး စညျသှပျဘူး လုပျငနျးဟာလညျး တှငျကယျြလာပွီး ပွိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ မြားလာတာကို တီဗီကွျောငွာတှမှော တှလေ့ာရမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါ လူတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှနေဲ့ အကိုကျညီဆုံး design thinking ကိုပိုငျဆိုငျတဲ့ လုပျငနျးက ပိုပွီးအောငျမွငျမှုကို ရရှိသှားပါတယျ။
နိုငျငံတကာစီးပှားရေးလုပျငနျးကို လလေ့ာရငျးနဲ့လညျး design thinking ကို ပိုပွီးနားလညျလာနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ အားကစားဖိနပျလို့ပွောလိုကျတာနဲ့ Nike ကိုပွေးမွငျမိမှာပါ။ Nike ရဲ့ ရှူးဖိနပျ series တှထေဲမှာ Flyknit Racer Shoes ရဲ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ ကှာလတီ တျောတျောကို နာမညျကွီးပါတယျ။ အားကစားဖိနပျတဈရံမှာ ဒီဇိုငျး၊ ဈေးနှုနျး၊ သကျသောငျ့သကျသာရှိမှုတှကေို မထုတျလုပျခငျ ပွီးပွညျ့စုံမှုကို ရရှိဖို့အတှကျ ၁၉၅ကွိမျ ဒီဇိုငျးဆှဲခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒါအပွငျ ဒီဇိုငျးဆှဲတဲ့အခါမှာ ဒီဇိုငျနာတှခေညျြး ဆှဲတာမဟုတျဘဲ Nike မှာ အလုပျလုပျတဲ့ ဝနျထမျးတှကေိုပါ ချေါပွီး ဆှဲပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ Nike ဝယျယူဝတျဆငျတဲ့သူတှရေဲ့ တုံ့ပွနျမှုတှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားပွီး ဒီဇိုငျးဆှဲခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့မို့ Nike ရဲ့ design thinking မှာ ထုတျကုနျပစ်စညျးတဈခုသကျသကျပဲ မဟုတျဘဲ ဝယျယူသူတှနေဲ့ ဝနျထမျးတှအေပျေါ ကိုယျခငျြးစာစိတျပါ ပါဝငျနတော တှနေို့ငျပါတယျ။
Related article >>> အောငျမွငျတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျ ဖွဈလိုပါလြှငျ….
အဲ့ဒါကွောငျ့ ယောငျးယောငျးတို့လညျး design thinking ကို စဉျးစားတဲ့အခါ ကိုယျ့ရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုဟာ ဘာလဲသခြောစီစဈပါ။ ကိုယျက အနုပညာမှာ တျောတာလား၊ ဟငျးခကျြတဲ့နရောမှာတျောတာလား၊ စာရေးတဲ့နရောမှာ တျောတာလား၊ လကျမှုပစ်စညျးတှကေိုဖနျတီးတဲ့ နရောမှာလား။ အဲ့ဒီအရာတှကေို Design Thinking နဲ့ ထုတျကုနျတဈခုကို ပုံဖျောကွညျ့ပါ။ Design Thinking ဟာလကေ့ငျြ့ရငျးနဲ့ ပိုပွီးတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ ထုတျကုနျတှအေမြားကွီးကို ဒီဇိုငျးတှေ ထှကျလာမှာပါ။ ကဲ…ယောငျးယောငျးတို့ရေ ဒီဆောငျးပါးလေးကိုဖတျပွီး ဘယျလိုထုတျကုနျမြိုးကို တှေးမိသှားလဲ။
Tags: business, design thinking, entrepreneurs, idea, Knowledge
ကျေးကျေး November 14, 2018